ArcGIS-ESRI - Bogga 2 - Geofumadas
Isticmaalka ArcGIS iyo waxyaabaha kale ee ESRI
Isbarbardhiga u dhexeeya ArcGIS iyo SuperGIS (oo hadda ku qoran Spanish)
OpenSource waxay ku kortay aalado ay ka mid yihiin gvSIG iyo Quantum GIS, iyagoo ku guuleystey qayb ka mid ah qeybta ballaaran ee suuqa oo hadda u matalaya softiweerka joomatikada. SuperGIS waa mid ka mid ah agabyada milkiilaha, oo qiime jaban ay raadinayso in ay nafteeda meeleeyaan ka hor xadka ballaaran ee ESRI ay ilaa hadda haysato.
ArcGIS-ESRI, tabo cusub, SuperGIS
10 + 5 maqaaladaa xasuusiya + majaladda 1
Ka dib markii dhadhanka xun oo naga tagay ciyaaraha kubadda cagta ayaa xalay iyo kilometric bandhigay ballan mortgage dhigaya na u qaadan, aan ka tago 20 alaabta si taxadar leh ka hor tagi laba caan xulay ee dunida geospatial. Waxaan doonayay in aan mowqif casri ah dhigo, laakiin dhamaadka waxaan ku faraxsanahay inaan ogaado ...
ArcGIS for plugin AutoCAD ESRI ayaa la sii daayay aalad in uu soo bandhigo xog ka ArcGIS ka AutoCAD, oo lulataa sida tab cusub ee Ribbon iyo uma baahnid inaad haysato laysanka ama barnaamij lagu rakibay ArcGIS. Works la versions AutoCAD in AutoCAD 2010 2012 wax ku saabsan AutoCAD aan sheegay ...
10 40 + bandhigyo shirka SIG libre 2012
In ka badan 40 mawduucyo mowduuc oo suurtagal ah ayaa lagu qaban doonaa Shirweynaha Lixaad ee SONY Free Girona. Waxaa laga yaabaa mid ka mid ah dhacdooyinka asalka Hispanic leh saameyn badan oo ku saabsan aragtida OpenSource oo loogu talagalay Nidaamka Macluumaadka Geographic. Sida aan u muujiyay 10 waxaan ka tagayaa mawduucyada ...
Saaxiibada Geographica waxay noo sheegeen waxyaabo ku saabsan naqshadaha ay ku jiraan habka tababarkooda, sidaa darteed waxaanu u qaadnaa fursadda ah inaan dhiirrigelinno dadaalkooda. Geographica waa shirkad loo qoondeeyay dhowr laan oo ka mid ah dhinacyada kala duwan, oo horumariyay mashaariicda macaamiisha istaraatiijiga ah kuwaas oo hubaal ahaan hubin doona natiijooyinka. Marka laga reebo warqadda G ...
Waxaan inta badan raacsan Fuhrer ah
Tani waa codsi ah in uu ka baxsan garaadlaawaha, laakiin dhab ahaan furfuraya waxa aan dhamaanteen ku doonayaa in aan noqdo mid fudud sida: Khariidadaha Google Dhinaca this -----> Satellite Hybrid Lakabka Lakabka Lakabka Lakabka maps Jooloojiyadda this GISArcGIS gees u barnaamijka GeoMedia MapInfo Microstation Bentley Map Waayo, a my ...
Maanta waxay ahayd maalin aad u xiiso badan oo loogu talagalay taageerayaasha tiknoolojiyada Apple, badanaa dadka hadda iyo kuwa isticmaala ee kiniinnada Ipad. Inkasta oo ereyada muhiimka ah ee maanta ku dhajiya mashiinnada raadinta ee mawduuca ay ka codsanayaan dhaleeceynta Ipad 2, haddii aad u baahan tahay inaad iibsato mid hore, haddii aad ku cusbooneysiin karto Ipad 1 ...
Apple - Mac, ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Microstation-Bentley
Waxa ugu fiican ee laga hadli karo dhacdooyinkan waa mawduucyo PDF ah oo aad u macquulsan ee ku saabsan habka tababarka ama go'aan qaadashada; in badan oo ka mid ah wakhtiyadan in dunidu u furan tahay mawduuc dhaqameedka ah ayaa soo jiidatay hab la yaab leh. Waa tusaale wanaagsan ee hal-abuurka aadanaha, oo dib loo habeynayo iyo ...
Juuninta 2010 ayaa laga faallooday waxaa laga heli doonaa ArcGIS 10, oo aan aragno waxay noqon doontaa guul muhiim ah oo lagu aqoonsanayo heerka booska ESRI ee degaanka geospatial. Horeba forumyada iyo goobaha kale waxaa jira hadalo badan, oo hubaal ka socda halkan Shirka Isticmaalayaasha July, waxaan awoodi doonaa inaan ogaano wax badan. Heerka ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Geoinformatics waxay soo gaartaa daabacaaddeeda koowaad ee 2010, iyada oo calaamad u ah feejignaanta fogaanta. Inkastoo sanadka uu yahay da 'yar, waxay u muuqataa in daabacaadyada xiga ay sii wadi doonaan khadkan, marka lagu daro waqtigan laba ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee qaybta aan xor ahayn: ERDAS iyo ENVI. Haddii ay wax yihiin sida aan u malaynayo, marka xigta ...
Tani waa jimicsi shuruudo isku mid ah, si loo qiyaaso waqtiga ay qaadato si aad u bilawdo barnaamijka gujinta astaanta astaanta ilaa illaa waqtiga uu socdo. Marka la eego ujeedooyinka isbarbardhigga, waxaan isticmaalaa midka bilaabma waqti yar, ka dibna calaamad u ah (wareegsan) waqtiyada la xiriira. Ma aqaano ...
Diyaarinta koorsada ArcGIS
Wax yar ka yar hal usbuuc, waxaan bilaabayaa inaan dareemo culeyska koorsada ArcGIS, kuwa ka soo baxa yaa ogtahay meesha, aad adigu aqbasho inaadan ogeyn goorta, iyo cida si lama filaan ah laguu sameeyey. Waa koox xiiso leh oo aan rabin in ay ku adkaato software aan la aqoon, oo leh lacag ...
ArcGIS-ESRI, cadastre, Baridda CAD / GIS
Sahanka cadastoolka leh saldhigga guud, marka laga reebo saxnaansho millimeter, wuxuu sidoo kale noqon karaa mid waxtarka u leh ujeedooyin kale, marka la eego in kor loo qaado heerka dhibic kasta. Aan aragno kiiskan, sida loo abuuro curves heerarka, taas oo aan horay u aragney AutoDesk Civil 3D, oo leh Bentley Geopak iyo Manifold GIS, sidoo kale ...
U adeegsiga Moodeelka Nooca si loo falanqeeyo Xeeladaha Xiritaanka COVID-19